Mugs - a elintantayo, ikakhulukazi zhivtsovye, igiya eyenzelwe ekubambeni inhlanzi okuzingela. Aye aziwa ngokuba sekudlule cishe ikhulu leminyaka, kodwa ezisetshenziswa kakhulu Emashumini amabili eminyaka adlule ngenxa nomzamo wokudoba abathanda yathuthuka kakhulu kokubili le nqubo abese igiya kulolu hlobo lokudoba. Lokhu kuyasiza kakhulu futhi ukwakhiwa kwezakhiwo ezintsha wokubacindezela nemisele, lapho lolu hlobo lokudoba sisihle kakhulu.
Ukudoba mug akekho kuphela kusukela ogwini, osesikebheni phezu kwamanzi ahlanzekile, amachibi kanye amadamu. Befuna isayithi kwesigubhu badoba dobychlivogo umdobi ngezinye izikhathi uhamba amakhilomitha amaningi ukuze bathole indawo yokupaka futhi uhlele tackles izinhlanzi. Ngaphezu kwalokho, idinga isikhathi ukubhukuda nge okuhlabayo, baxhuma izinhlanzi kahle.
Yingakho ekubambeni ku mug is ezithakazelisayo elikhiqizayo okuningi futhi ezingaphezu kuka okufanayo yokwenziwa kodobo seine, zherlitsy njll I Angler kufanele ukwazana umehluko wemisindo nemiqondo yamagama, lapho kufanele ukwazi ukuqondisa umkhumbi.
Izinkomishi kuthiwa ngenela kokuba okusezingeni eliphezulu ekubambeni kahle. Basuke esehlanganise elula enkulu yamanzi phambi, umoya kancane ngokwabo ukuthola izinhlanzi, ukuthutheleka isikhala sakhe yokupaka. Ngakho-ke, ukudoba mug has a inzuzo enkulu phezu kwezinhlobo eziningi ukuthi bayakwazi ukudoba endaweni encane kuphela.
Ukuhambisa eduze Yiqiniso, lokunyenti, ngabe tinkomishi umba phezu izinhlanzi yokupaka, ngokushesha ukuthola umhlaseli nekunonophisa bite. Futhi uma indawo lapho umdobi ziyoncibilika imibuthano 10-15, akhethwe kahle, kokubamba izinhlanzi eziningi Siyaqiniseka kuye.
I ezivamile inkomishi disc emise kokuba ukushuba bebathathu, kanye ububanzi ngamasentimitha kuze kube nanhlanu. Zakhiwa izingxenye ezimbili - disc ngokhuni noma Foam futhi pin - Izinduku tapered, okuyinto ngakolunye uhlangothi is ewugqinsi kanye nezinye has a slot. Circumferentially emhlabeni disk kuyinto inkatho engajulile ngoba emazombezombe line ukudoba, kuyilapho maphakathi emgodini ukudla ngokusebenzisa izinti. Lapho, kwi disc kufanele kube ukusikeka ezimbili ezidingekayo ukuze aqinisekise line ukudoba ngesikhathi ukufakwa kwe-indilinga.
Eqinisweni, indingilizi ngezimiso - kuba zherlitsy efanayo, nje elintantayo.
I ukudoba ezithakazelisayo kakhulu lokunyenti, ngabe tinkomishi e crepe, Snag onezinto, snags, Vershinnikov. Ezindaweni ezinjalo kufanele kruzhochnika cishe akukho izimbangi. Nakuba ngezinye izikhathi wayenomuzwa nezingozi ukulahlekelwa ezithothene phezu ngenela, kodwa kukhona okungaphezu bavuzwa ngokuboniswa catch ezikhexisayo. Ngo ala machibi isizinda ngokuvamile omkhulu ukujula Pike, perch ezinkulu noma walleye ubudala - abathandi ngicashe crepe.
Ukudoba mug zizosebenza kuphela uma Angler uyazi ngaphambi sezulu, ngokukhethekile, isiqondiso namandla omoya, okungukufa yisandla ku lolu hlobo lokudoba.
Futhi uma kufanele, isibonelo, carp in the amakilabhu, kufanele kucatshangelwe nangaphezulu. Mugs kudingekile ukuncibilikisa phambi, okuwenza aqondane kulowo moya.
Angler kuyoba elula futhi kulula kakhulu uma amaqembu ngeke ukukhulisa elide ukubhukuda. Ukube kwakungenjalo, kuyodingeka emva ngokubeka umbuthano zokugcina kwesokudla emuva kuqala, ukuze uyisuse.
Tony obuphelele elilungile liphakathi ibanga e emayela: bese nemibuthano ngokuvamile nigijime, futhi ihlanganisa ingxenye enkulu ichibi.
imibuthano ukulungiselela iqala ogwini, obeka insika emgodini, nazhivlyaya izingwegwe kanye lolo izinhlanzi ukugijima ku "ozinzile". Nqamula ku-front ingxenye uTony, isikebhe sokudoba ubeka perpendicular esiqondisweni somoya, bese kulinganiswa off the ukujula edingekayo, usetha imibuthano. Ngenxa yale njongo, lemali edingekile of line vdevaetsya slot ezizungeze insika futhi emuva vdevaetsya.
Kuye ngalokho izinhlanzi uya ukubamba Angler, usayizi lolo kuyakhethwa. Futhi uma izinhlanzi indondo ngamunye kudingeka isandla, bese evamile ekubambeni anele ezintathu noma isiyengo semisantimetrovogo.
Catching walleye entwasahlobo ukuphotha. Indlela ukubamba Pike-perch kwi ukuphotha?
Ukudoba nge lolo bukhoma
Baubles Legendary "Atom": imfihlo yempumelelo
Pond Shabrovsky: ukudoba Imali (ukubuyekezwa)
Elena Aminov - Biography nama-movie
Grunge Soft - isitayela vogue. Grunge Soft: incazelo, izici kanye nezincomo